Jesu Akazvarirwa Kupi Uye Riini? | Upenyu hwaJesu
JESU ANOZVARIRWA MUBHETREHEMA
VAFUDZI VANOSHANYIRA JESU ACHANGOZVARWA
Kesari Agasto, mutongi weUmambo hweRoma, azivisa kuti munhu wose anofanira kuverengwa. Saka Josefa anofanira kuenda kuguta raakazvarirwa reBhetrehema, kumaodzanyemba kweJerusarema pamwe naMariya.
Vanhu vakawanda vauya muBhetrehema kuzoverengwa. Hapana dzimba dzokuti Josefa naMariya vagare zvokuti vanonogara munochengeterwa zvipfuwo zvakadai semadhongi nedzimwe mhuka. Jesu anozvarirwa imomo. Mariya anomuputira nemachira omuradzika muchidyiro chezvipfuwo.
Mwari anofanira kunge ari iye akaita kuti Kesari Agasto agadze mutemo uyu wekuverengwa kwevanhu. Achizviitirei? Nokuti izvi zvaizoita kuti Jesu azvarirwe kuBhetrehema, guta rakazvarirwa tateguru vake Mambo Dhavhidhi. Magwaro akanga agara ataura kuti guta iri ndiro raizozvarirwa Mutongi akanga avimbiswa.—Mika 5:2.
Uhwu usiku hunokosha zvechokwadi! Vafudzi vari musango vanoona chiedza chinopenya zvikuru pavari. Kubwinya kwaJehovha! Imwe yengirozi dzaMwari inoudza vafudzi kuti: “Musatya, nokuti, tarirai! ndinokuzivisai mashoko akanaka omufaro mukuru uchava nevanhu vose, nokuti nhasi maberekerwa Muponesi, uyo ari Kristu Ishe, muguta raDhavhidhi. Zvino ichi ndicho chiratidzo kwamuri: muchawana mucheche akaputirwa nemachira, akarara muchidyiro chezvipfuwo.” Dzimwe ngirozi dzakawanda dzinobva dzasvika pakarepo dzichiti: “Mwari ngaakudzwe kumusorosoro, uye panyika rugare ngaruve pavanhu vaanotendera.”—Ruka 2:10-14.
Ngirozi dzaenda, vafudzi vanosara vachitaurirana kuti: “Tinotofanira kuenda kuBhetrehema tinoona chinhu ichi chaitika, chataziviswa naJehovha.” (Ruka 2:15) Vanobva vakurumidza kuenda vowana Jesu ari pavaudzwa chaipo nengirozi. Pavanorondedzera zvavaudzwa nengirozi, vose vanozvinzwa vanoshamiswa. Mariya anofadzwa zvikuru nemashoko aya oachengeta mumwoyo make.
Nhasi uno vakawanda vanofunga kuti Jesu akazvarwa musi wa25 December. Asi munharaunda yeBhetrehema, mumwedzi waDecember kunenge kuchinaya uye kuchitonhora. Pamwe pacho kunotoita sinou. Hazvingamboita kuti vafudzi vaende kusango nezvipfuwo usiku mumwaka wakadaro. Hazvingaitiwo kuti mambo weRoma audze vanhu kuti vauye kuzoverengwa nguva yechando iye achitoziva kuti vagara vaine kapfungwa kokumupandukira. Jesu anofanira kunge akazvarwa muna October.
Nei Josefa naMariya vachifanira kuenda kuBhetrehema?
Zvinhu zvipi zvinoshamisa zvinoitika usiku hunozvarwa Jesu?
Nei zvisingaiti kuti titi Jesu akazvarwa musi wa25 December?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Jesu Akazvarirwa Kupi Uye Riini?